Isithunzi sobuso obunesiqingatha. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Olu qeqesho luya kukufundisa yongeza isithunzi ebusweni. Esi siphumo sinokusetyenziswa nakwamanye amalungu omzimba apho ufuna ukulinganisa khona isithunzi, nokuba kungenxa yokuba sidibanise into efuna ukuba isithunzi sibe eyinyani ngakumbi, okanye ugxininise isithunzi esele sincinci.
Iziphumo zesithunzi esiza kuchaza zixhomekeke kubungakanani bokukhanya komfanekiso wakho, ngamanye amaxesha kufuneka silingise isithunzi ngebrashi emnyama kwaye uyifiphaze, kodwa kule meko siza kukufundisa indlela yokuqaqambisa isithunzi esele sikhona, kumfanekiso ongafuniyo ibrashi emnyama ngaphezulu.
Sithatha isixhobo ukungabonakali, sonyusa okanye sinciphise ubungakanani bebrashi, sishiya ukubuna okuncinci kuyo, ke oko kuthintela imiphetho ebukhali kakhulu.
Kuqala senza izinto ezithile phakathi kweemidton, kwaye sivavanye Ukuvezwa sifuna ukukunika ukuya kwizithunzi. Siqale nge-13% emva koko sayonyusa yaya kwi-29% kuba ibibonakala incinci kakhulu kuthi.
Nje ukuba ibe yimali esiyifunayo, sikhetha izibane, endaweni yehafu. Ngale ndlela emva koko senza mnyama iithowuni zokukhanya ukuba sihleli kweli candelo besilivale ngaphambili. Oku kuya kuthintela ukuba umfanekiso ungagcwaliswa ngombala.
Ukuba emva kokumnyama kwezi thowuni ukuba umfanekiso uhlala unemibala egcweleyo, siya kuyisebenzisa isixhobo seponji, ngaphakathi kwayo siza kusebenzisa Inketho yedesaturate, kwaye ngoluqwalaselo siya kudlula ibrashi kube kanye okanye kabini kwicandelo eligcweleyo.
Ukugqiba silungisa i amanqanaba emithunzi kunye nokukhanya ukungena kwimenyu Uhlengahlengiso loMfanekiso-Amagophe, kwaye ukope umzobo wegophe oza kuwubona emfanekisweni, ukuze uhlengahlengise ukukhanya kunye nokungafani ngokulinganayo, simele sixelise ngaphezulu okanye ngaphantsi umzobo S kwibhokisi yeeCurves.
Oku kusebenza ngokungaphaya nika umnxeba omnandi emehlweni kwifoto efana nale uyibonayo, okanye ukunika Umoya omdaka ukufota Apho sifakwe khona, kwimowudi yoyikeka ngakumbi. Kwaye njengoko sele sichazile ngasentla, inokusetyenziswa kwamanye amalungu omzimba, xa sidibanisa, umzekelo, iwotshi esihlahleni kwaye sifuna ukuba ibe yeyokwenyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Isithunzi sobuso obunesiqingatha.